Yekupedzisira Nongedzo kuPinterest Metrics | Martech Zone
Isu tinowana rwakanaka rwizi rwetraffic kubva kuPinterest. Izvo zvakaenzana chero bedzi kutumira kwedu paPinterest kuri kuenderana. Izvo zvakabatsirawo patakaisa iyo Pinterest Pini Iyo Bhatani reMifananidzo - iwe uchazviona kana iwe uchikurisa mufananidzo uri pazasi. Vazhinji vashoma vanhu vari kugovera edu infographics.
Our Kushambadzira Infographics bhodhi vangangoita vane chiuru chevateveri uye isu zvechokwadi tinoita zvishoma zvishoma kunze kwekutumira edu infographics ipapo! Iwo mametric isu atinowanzo tarisa pazviri ese anonongedzera zvakananga kune vangani vashanyi vatinowana kune yedu saiti kubva kuPinterest uye nemabatiro avanoshandura kana kuita nevatinotsigira.
Mabhizinesi ari kubudirira kushandisa Pinterest - ingo tarisa vatengi vedu, Chinyorwa chaAngie, nemapuranga avo. Vanoita basa rinoshamisa pakuchengeta mabhodhi gumi nemaviri ane zvisingaite zvemukati. Kana iwe uri kushandisa Pinterest kune yako epamhepo kushambadzira kuyedza, kune akati wandei metric ekuramba uchiziva nezvayo. Zvemagariro Stacked isa pamwe iyi infographic ne yakazara rondedzero yePinterest metric iwe unogona kuongorora uye nemabatiro auri kuita kuita kwako.
Tags: clicksmashokovateveriMatsimbaKutaurirana kwavatorilikesnembamboPinterestPinterest kushambadzirapinterest metricspinterest yekuteverakusvikarepinsvelocity
Mixpanel: Tsika, Chiitiko-Chinotungamirwa Analytics